Lahatsoratra ho an'ny firesahana (TTS) sy hologramana toa an'i Microsoft Hololens 2: Martin Vrijland
Betsaka ny mbola tsy misalasala momba ny hevitra hoe afaka miaina amin'ny tontolo virtoaly isika amin'ny ho avy. Izay toerana ampiasantsika ny fantsom-pifandraisana miadana amin'ny bandy ho an'ny atidohantsika, toy ny maso, sofina, orona, lela, hikasika sy ny toy izany, ny BCI (Brain Computer Interface) avy amin'ny Neuralink (iray amin'ireo orinasan'ny Elon Musk) dia efa ao amin'ny 2020 afaka manome fifandraisana haingana kokoa amin'ny atidoha. Aoka izay marina; alao ny sofina, ohatra. Ny eardrum dia tsy maintsy manova ny feo ho toy ny hebreo elektrika ary ny ati-doha dia tsy maintsy mandika izany ho feo amin'ny endrika, ohatra, soratra na mozika. Koa misy fandikana eo anelanelan'izy ireo. Ny tantara voalaza dia tsy maintsy ho avy isaky ny teny na isaky ny boky dia tsy maintsy vakiana tsindraindray. Tena mety kokoa raha afaka mametraka boky iray manontolo amin'ny 1x ao amin'ny atidoha ianao. Mankany amin'io lalana io isika amin'ny fampandrosoana ny BCI.
Miaraka amin'ny Micorsoft Hololens 2 dia mbola ilaina ny mamolavola hologram ho zava-misy marina eo amin'ny habaka. Miaraka amin'ny BCI dia azonao atao ny mametraka ny fampisehoana fisehoana mivantana ao afovoan-tsain'ny ati-doha. Ity rehetra ity, dia mahavariana be ihany izany (jereo horonantsary eto ambany). Na izany aza, dia tsy zavatra ho antsika mihitsy amin'ny fotoana fohy manantena.
Zahao ny famelabelarana Neuralink Elon Musk etsy ambany ary vakio ny fanazavako amin'ny antsipiriany ity lahatsoratra ity (ary vakio bebe kokoa eo ambanin'ny lahatsary).
Na izany aza, ny fivoarana toy ny an'ny Microsoft Hololens 2 dia efa mahasoa amin'ny fampandrosoana ny rafitra izay mamorona sehatra nomerika izay ahitan'ny tsirairay ny zavatra mitovy na ny hologram mitovy amin'ny toerana mitovy, fa amin'ny toerana fijerena hafa. Google namorona ny Teknolojia Cloud Anchor ary ny drafitra dia ny sarintany ny tany manontolo mba hahafahanao manisy zavatra eny an-dàlana rehetra izay hitan'ny olona rehetra; eo amin'ny toerana iray ihany, fa avy amin'ny zoro hafa. Noho izany dia afaka manana dinosaur mandeha eny an-dalana izay mety hitan'ny rehetra ianao. Ny Neuralink BCI avy any Elon Musk dia mamela ny hanitra ilay biby ao amin'ny 2020, satria ity fofona ity dia mety apetraka ao amin'ny afovoan'ny fofona manitra. Ny sary rehetra hitanao na isaky ny fandinihana ataontsika amin'ny alàlan'ny sivana ara-batana antsika (ny maso, ny sofina, ny orona, sns) dia azo adika amin'ny spektran'ny elektromagnetika. Ny zavatra mampatahotra dia ilaina ny bandwidth tsara sy angon-drakitra marina avy amin'ilay sombin-tsivana ary amin'ny alàlan'ny fifandraisana neuro dia tokony hojerena ao anaty ati-doha izany.
Maninona aho no manome anao fomba fijery hafa amin'ny fampandrosoana ny teknolojia? Satria mety ho azonao avy eo ny lahatsoratra momba ny zava-misy virtoaly sy ny maha-tokana ahy. Ho hitanao eto ambany ireo lahatsoratra ireo ity menu ity. Ao amin'ny ahy boky vaovao Nohazavaiko ny antony maha-zava-dehibe izany fahalalana izany. Ho hitanao ny tsirony ao amin'ireo lahatsoratra eo ambanin'ny lisitry ny sakafo voalaza.
Tags: 2, augmented, Elon, Featured, Hololens, Microsoft, Musk, Neuralink, zava-misy, simulation, virtoaly
28 Septambra 2019 ao amin'ny 07: 06
Manonofinofy momba izany dia afaka manantena ny fanafihana vahiny mahafinaritra isika, indrindra indrindra raha ny tatitra vao haingana tao amin'ny MSM, misy ihany koa ny Ady eran'izao tontolo izao mivoaka, ohatra.
Tonga tokoa ilay karatra farany, izay mahalala. Werner von Braun dia toa nilaza an'io araka io ramatoa io. Ireo hery nametraka ity tetikasa fampahafantarana ity manontolo amin'ny baomba baomba.
Mangatsiaka ho azy ireo ny Spaceships any an-danitra mandritra ny fotoana fohy, ny zavatra hitantsika etsy ambony dia izay tadiavintsika ho jerena, heveriko fa nahafahan'izy ireo imbetsaka bebe kokoa, hojerentsika izany.
28 Septambra 2019 ao amin'ny 17: 18
tsy afaka miandry izany, efa tonga ny tady avy amin'ny labiera Belzika. Serge Monast koa dia efa naminavina izany tamin'ny taona 90 tamin'ny antonony izay nantsoiny hoe vava manga manga .. azontsika jerena tsara ireo fahasamihafana misy ny TR-3B mahazatra. Efa nahita maro tamin'ny alàlan'ny fakantsariko alina aho, ny sasany dia lehibe toy ny kianja filalaovana baolina 2-3..NATO toa toa malaza.
Seza efa vita dia efa vonona…
29 Septambra 2019 ao amin'ny 19: 55
HAARP & Fanaraha-tsaina - Ny zava-misy fotsiny
1 Oktobra 2019 ao amin'ny 09: 59
« Papa Francis no miantso ny mpitondra eran'izao tontolo izao ho ao Vatican amin'ny 14 amin'ny volana Mey 2020 hanao pact manerantany
Ny mpitsikera Greta Thunberg dia mpivadika ara-pitondran-tena amin'ny tsy firaisana ara-pitondran-tena amin'ny tsy firaisana ara-pitondran-tena: famarana ny antony »